Okwesithathu phakathi kwazo zonke izifo umdlavuza kuthatha eside nomdlavuza wesikhumba. Lokhu zokugula libhekene khona izimo precancerous (izifo) ezifana nesifo Paget sika, xeroderma pigmentosum, erythroplasia Queyrat, yisifo sikaBowen, kanye nezinguquko senile ezifana: keratomas yoma senile, keratoacanthoma.
Ngokuvamile, umdlavuza wesikhumba eba ngemva ukuhlukumezeka futhi bashise izibazi, i-lupus ne izilonda trophic kanye syphiloma.
Ngaphezu kwalokho, isici etiologic e umdlavuza ukwakheka kungenziwa nomthelela ukuvezwa emsebenzini (ukuchayeka emisebeni, kanye nalabo abaxhumane nathi nge imikhiqizo uwoyela, amalahle kanye kwamakhemikhali ahlukahlukene).
Lokhu esiwufuzo kuyinto xeroderma pigmentosum ezihambisana enciphile DNA ukulungisa umthamo, okuyinto kubangelwa ukuchayeka emisebeni ultraviolet.
A engozini ethile maqondana emdlavuzeni wesikhumba kudala ngokujulile esikhunjeni, flat, nge wabuka usongene nevi. I ububanzi we yokugcina, njengoba umthetho, kuba amamilimitha angu engaphezu kweyisithupha. ingozi ethile izilonda esikhunjeni ngezibonakaliso yomsebenzi (kokukhulisa, ukulunywa, ukuluma, evutha, ushintsho lesikhumba), lona lelo qembu kuthiwa wenziwa dysplastic giant nevi okwesibhakabhaka.
Kuye izici histological yilezi ezilandelayo izinhlobo umdlavuza kwesikhumba: basal cell, i-squamous, adnexal carcinoma ne-melanoma.
Ingxenye esemqoka zonke umdlavuza izifo zesikhumba ukuthatha ngqo umdlavuza ne-melanoma (cishe ayisishiyagalolunye nesithupha amaphesenti omdlavuza wesikhumba).
Ziyini izimpawu nomdlavuza wesikhumba? Squamous owabonakaliswa hyperkeratosis futhi usuthathelwa isikhumba yoma. Lapho yoma kwesikhumba ubukeka acwebezelayo futhi kamuva ulcerate. Skin iphethini iphele. Ngaphansi kwesithombe senqaba the Ithumba uphawu palpable.
Umdlavuza wesikhumba ibonakala valikoobrazno ephakanyiswe imiphetho, telangiectasias futhi ulceration phezu. Ngo okulandelayo ukubhujiswa igazi futhi lymph izitsha, ekuthuthukiseni oozing, ukopha livela hyperemia.
Ukubhujiswa ezihlobene isikhumba - the follicle izinwele angatlhayela vellus izinwele. Melanoma ihlukile lesikhumba nobuntu izindawo kunezinxushunxushu futhi zingcolile esukela ekuhlehleni.
metastases Developed avele ezehlela bonke zomdlavuza izimpawu zokudakwa.
Ngenjongo uphethwe isicelo ukuhlolwa kwabathinta (nokususa ngenhloso ngaphandle nommese isimila) kanye smear (kumasayithi sasigcwala izilonda). Ngaphezu kwalokho, njengoba ukhetho zokuxilonga osebenza biopsy Imininingwane.
Ukwelashwa lomdlavuza wesikhumba sehlukaniswe kuhlinzwa, kuhlangene. Lesi sakamuva kuhlanganisa ngemisebe nangamakhemikhali.
Ezigabeni zokuqala ukusetshenziswa ahlangene kanye nokwelashwa kuhlinzwa. ukwelashwa ngemisebe nangamakhemikhali asetshenziswa isigaba generalized, ayizwakali.
Ukuvimbela umdlavuza kwesikhumba ukuvikela ngokumelene imiphumela emibi yelanga ye. Ukuze uvimbele ukususwa anomdlavuza isikhumba ukusebenzisana zokwakheka eminye cwaningo morphological yokugcina.
Ngakho, umdlavuza wesikhumba akuyona nje isimo owawuvamile ngaleso sikhathi, kodwa futhi ngempela eziyingozi ngokuya ukuthuthukiswa Ukudlulela futhi dermal ukuxakeka.
Ngenxa ukuthola lingaze (uphethwe) lomdlavuza wesikhumba luyingozi akunzima. Ngokuqondene nalokhu ezingavamile ukuthola ifomu emabangeni kamuva Ukudlulela. Ukukhomba melanoma ngendlela efanele usaqala kubangela high-grade ekwelapheni lesi sifo futhi eminye a Izibikezelo evumayo.
Ukwakheka amakhowe. Ukusetshenziswa amakhowe
Izindlela imithambo yokutakula futhi inhliziyo
Kuyini umbhalo, izimpawu zayo kanye indlela efanele yokubiza amagama ngesiNgisi